परम्परागत Gazpacho - Thermomix को लागि नुस्खा ThermoRecines
सूप्स3 मिनेट4 व्यक्ति
अब के सुरु हुन्छ तातोम हरेक सप्ताहमा गाजापाचो गर्छु। मेरो श्रीमान् र मलाई यो साँच्चै मनपर्दछ।
Thermomix® हुनु भन्दा पहिले म यो गर्न एकदम आलस्य थिए, किनकि यसले सामग्री तौल गर्दैन र यसले मलाई सधैं फिट गर्दैन। अब, यसको विपरित हो, यो सँधै मलाई पूर्ण रूपमा फिट गर्दछ र एक क्षणमा यो सकियो.
धेरै चिसो र केही बरफ संग, यो हामी कसरी यसलाई राम्रो मनपर्दछ। हामी पनि रमाउन सक्छौं यसको कुनै पनि संस्करणहरू यसले हामीलाई थप विविध आहार लिन मद्दत गर्दछ।
2 उत्तम बनावट कसरी पाउने?
त्यसो गर्न सजिलो छ कि तपाइँ यसलाई तयार गर्न अल्छी हुनुहुने छैन।
कुल समय: 3M
रातो र धेरै पाकेको टमाटरको १ K (वा कुचल प्राकृतिक टमाटरको 1 ठूलो जार)
खुलेको काँक्रा को -80०-१०० g (म g० g थप गर्दछ)
१२ आइस क्युब्स
G० ग्राम चिसो पानी
हामीले गिलासमा सबै तरकारीहरू, सिरका र नुन राख्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति at मा।
आइस क्यूब र प्रोग्राम थप्नुहोस् २ मिनेट, गति १० मा।
हामी तेल थप्छौं, यसलाई स्थितिमा राख्छौं गिलास बन्द छ र एक सेकेन्ड को लागी एक टर्बो बूस्ट दिन्छ।
हामी पानी र मिक्स थप्दछौं Seconds सेकेन्ड, गति at मा।
टोस्टको टुक्राहरू र उही तरकारीहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन हामीले सानो टुक्रामा काटिएको प्रयोग गर्यौं।
यदि तपाईं पुरानो Thermomix® मोडेल प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईं छप्परबाट बच्न चाहानुहुन्छ, तपाईं टोकरीलाई बिर्कोको माथि राख्न सक्नुहुन्छ।
उत्तम बनावट कसरी पाउने?
यदि तपाई आफ्नो गाजापाचोका लागि उत्तम बनावट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यी दुई तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
एक लागि अधिक तरल गाजापाचो: तपाईंले भर्खर केही आईस क्युब थप्नु पर्छ र जब यो पग्लन्छ यसले यसलाई अधिक तरल बनाउँदछ।
एक लागि बाक्लो गाजापाचो: तपाईं एक दिन देखि १ 150० ग्राम रोटी थप्न सक्नुहुन्छ। तरकारीहरू सँगसँगै यसलाई चरण १ मा समावेश गर्नुहोस् तपाईंको चिसो सूपमा शरीर थप्न।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, सजिलो, गर्मी रेसिपी, सूप र क्रिम, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सूप र क्रिम » gazpacho
म जान्न चाहन्छु गजापाचोको कति गिलासहरू यो बाहिर आउँदछ किनकि घरमा हामी दुईजना छौं। के यो राम्रो राख्दछ यदि यो रातभर राखिएको छ?
नमस्ते मनु, घरमा केवल मेरो श्रीमान् र म यो लिन्छु र सत्य यो हो कि हामीले तीन दिनमा यो लियौं। म यसलाई ब्ल्यान्डरको भाँडोमा पेचको बिर्कोसँग भण्डार गर्दछु (मर्काडोनाबाट) र यो फ्रिजमा चार दिनसम्म राख्नेछ। सत्य यो हो कि जब यो तातो छ, यो हाम्रो लागि लामो समयसम्म रहँदैन।
पिली डायज भन्यो
मलाई एलेनाको नुस्खा मनपर्‍यो, उत्तरमा उसले अझै गाजापाचो बनाउँदैन तर सबै आउँनेछ। एउटा सानो प्रश्न तपाईं फ्रिजमा कति लामो राख्न सक्नुहुन्छ? शुभकामना
पिली डियाजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते पिलि, म तपाईंलाई मनुलाई कसरी भन्छु, यो फ्रिजमा लगभग चार दिनको लागि उत्तम स्थितिमा रहन्छ, राम्रोसँग कभर गरिएको। तर, सत्य यो हो कि घरमा यो धेरै कम समय रहन्छ किनभने हामी तिनीहरूलाई तुरुन्तै लिन्छौं। शुभकामना।
गजापाचो रेसिपीको फाइदा उठाउँदै, म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु कि यदि तपाईं हामीलाई तरबूजको क्रीम बनाउनको लागि एक नुस्खा सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ कि, जुन मैले केहि समयमा प्रयास गरेको छु र म सँधै घरमा राख्न चाहन्छु ...
नमस्कार रोसियो। मँ केहि राम्रो नुस्खा खोज्दै छु। म निश्चित छु कि यस हप्तामा यो गर्नेछु र तिमीलाई बताउँछु।
नमस्कार एलेना, मैले खरबुजा ग्यासपाचो बनाएको छु र यो निकै राम्रो छ, १ टमाटर, १ हरियो मिर्च, १ प्याज, आधा लसुन, 1०० ग्राम खरबूजा, s टुक्रा रोटी, हामको २ टुक्रा, १ pra झींगा, grams० ग्राम जैतुन , २० ग्राम सिरका, नुनको पेलेस्को। हामी खरबुजालाई बीउबिना ​​र छालाबिना टुक्रा बनाउँछौं, आधा लसुन, हरी मिर्च, टमाटर, चाइभ्स सबै थोरै टुक्रामा राख्छौं र ब्रेडक्रम्ब बनिसकेपछि सबै कुरालाई राम्रोसँग क्रश गर्दछ। र अलिकता कुचो, झींगा २ मिनेटको लागि एकदम थोरै नुनको साथ पकाइन्छ, ह्यामलाई सानो टुक्रामा काटिन्छ र पकाएको झींगाको साथ ग्यासपाको माथि बनाइन्छ। ताजा खान तयार छन्।…
नमस्ते मारी कारमेन, व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद। म यो दिन gazpacho बनाउनेछु किनकि यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ। जब म गर्छु, म तपाईंलाई कसरी भन्नेछु। खैर, म क्यान्टाब्रियाबाट हुँ। शुभकामना।
नमस्ते केटीहरू, यस नुस्खाका लागि धन्यवाद, हिजो मैले यसलाई बनाएँ र गजपाचो स्वादिष्ट भयो, फ्रिजमा सायद मेरो बाँकी छ, अब राम्रो मौसम आउँदैछ म वास्तवमै चाहान्छु विशेष गरी किनभने यो एकदम स्वस्थ छ। म तपाईंलाई यो अद्भुत ब्लगका लागि बधाई दिन चाहन्छु जुन म र मेरी आमा दुबैले सिफारिस गरेका थिए, हामीले धेरै व्यंजनहरू बनायौं जुन एउटा राम्रो कुरा हो, अर्को दिन सबै साथीहरू घरमा खाजा खाने थियो, मैले केक तयार गरें। Ch चकलेटहरू र उनीहरू सबैले यसलाई मन पराउँथे, भनौं कि तिनीहरूले यसलाई दोहोर्याईदिए पनि।
तपाईको व्यंजनहरु साझा गर्न को लागी धेरै धन्यवाद, बधाई छ।
स्टेफीलाई जवाफ दिनुहोस्
म धेरै खुसी छु, स्टेफी! हामी धेरै उत्साहित छौं कि तपाईंलाई हाम्रो व्यंजनहरू मनपर्दछ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद! शुभकामना।
Gazpacho मा बधाई छ !!
धेरै राम्रो ... मैले हिजोलाई खाना र एमएमएमएमका लागि गरें !!! तर अर्को पटक म यो अधिक काँक्रो राख्नेछु, किनकि हामीलाई यो धेरै मनपर्दछ र यो ध्यान दिएन पनि सकिन्थ्यो। आह र मैले भाँडाको mmmmmm बाट प्राकृतिक कुचिएको टमाटरको साथ संस्करण तैयार गर्‍यौं, यसले अलि बढी स्वाद दिन्छ।
म तपाईलाई अत्यन्त मन पराउँछु, लिडिया! शुभकामना।
मैले भर्खरै यो विधि बनाएँ र स्वाद एकदम राम्रो छ, तर मैले पत्ता लगाएको गल्ती भनेको यो हो कि मलाई धेरै ठेस लाग्यो र जब मैले यो हातले गरेँ मैले तिनीहरूलाई ध्यान दिएन, मलाई थाहा छैन गल्ती त्यस्तै भएको छ कि छैन। पाठ्यक्रम मैले यसमा हिउँ राखें, मैले चरण छोडे र यसले अझ राम्रोसँग क्रश गर्न मद्दत गर्दछ।
म अर्को आशा गर्छु। एक चोटि मैले यो गरें, म अबदेखि राम्रो छु किनकि मलाई गर्मीको साथ धेरै यस्तो लाग्छ।
हामी दुबै को लागी एक ठूलो चुम्बन र यो राम्रो जारी
बैंगनीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते भिओलेटा, जब हामी बरफ फ्याँक्दछौं, सबै कुरा गति १० मा कुचलिन्छ र त्यसैले त्यहाँ ठेस लाग्दैन। यस चरण छोड्दा तपाईले यसलाई काट्नु भएको छैन। अर्को पटक यो गर्नुहोस् जब यो नुस्खामा आउँदछ, तपाईं कति स्वादिष्ट देख्नुहुनेछ! चुम्बनहरू।
नमस्कार! तपाईले गर्नुहुने सबै कुराको लागि धन्यवाद, एक नौसिखिएक प्रश्न ... के तपाईंले टमाटरहरू बोर्याउनु हुन्छ? Bsa
नमस्कार एलेना, म तिनीहरूलाई कपाल गर्छु, तर यो आवश्यक छैन। शुभकामना।
पहिले तपाईको ब्लगमा बधाई छ। मैले धेरै रेसिपीहरू र सफल बनाइसकेको छु। त्यो गजापाचोको साथ मलाई समस्या भएको छ किनकि २ मिनेटको गतिमा १० धेरै गाजापाचो जताततै बाहिर आयो, विशेष गरी ढक्कन र रबरको बिचको संयुक्त कारण। यो यति धेरै लिक्विड छ कि यसलाई सबै ठाउँमा कुचिएको छैन र मैले यसलाई दोस्रो पटक आधा गाजापाचोसँग पास गर्नुपर्‍यो। यो निश्चित छ कि2टमाटर छ? धन्यवाद।
नमस्कार भ्यालेरी, हो यो टमाटरको एक किलो हो र यदि यो रबरको माध्यमबाट बाहिर आयो भने यो हो किनकि यो पहिले नै अलिकता आफैंमा दिइएको छ र तपाईंले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो मलाई पनि भएको छ। बाँकी टुक्राहरूको लागि, दुई मिनेट पर्याप्त छ र सबै चीज पूर्ण रूपमा कुचलिएको छ। बधाई छ र मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो।
नमस्ते, मैले लामो समय सम्म केहि लेखेको छैन तर यो नसोच्नुहोस् कि यसको मतलब मैले केहि गर्दिन किनकि तपाईंको रेसिपी स्वादिष्ट छन्। ठिकै छ, gazapacho मेरो लागि पनि महान छ तर म एक समस्या केहि छ कि ढक्कन को पक्ष मा सबै लेपित छ र म ढक्कन समात्नु पर्छ किनभने यो खोल्न को लागी र एक त्रुटि बनाउँछ त्यसैले मलाई के हुन्छ थाहा छैन किनभने। म रकम थप्छु सही, मलाई थाहा छैन यदि कभरमा गल्ती छ वा मलाई के गर्ने थाहा छैन भने, मलाई किन यस्तो हुन्छ भनेर मलाई थाहा हुन्छ, धेरै धन्यवाद, यो हो कि मैले सबै गुमाएको छु
नमस्ते Mª। एन्जलस, मलाई लाग्छ कि रबर पहिले नै फ्रि छ र यो गल्तीको लागि सामान्य छैन। म हरेक हप्ता गजापाचो बनाउँछु र यसले गल्ती गर्दैन र ढक्कन ठीक रहन्छ। यदि तरल ढक्कनबाट बाहिर आयो भने, तपाईंले रबर परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। तपाइँको प्रस्तुतकर्ताको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस् र उनलाई थाहा दिनुहोस्। शुभकामना।
माफ गर्नुहोस्, एक Andalusian को रूपमा मैले भन्नु पर्छ कि यो राम्रो Andalusian gazpacho जस्तो केहि छैन। बाँकी बरफ, बाँचेको क्यान्ड टमाटर, रोटीको अभाव, र तेल र लसुनको साथ धेरै उदार।
पेड्रोटोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते पेड्रोटो, मैले धेरै भिन्नै ग्याजापाचोहरू प्रयोग गरें। मेरो श्रीमान्नीको हजुरआमाले एक्स्ट्रेमाडुरान गजापाचो बनाउँछिन् जुन स्वादिष्ट हुन्छ। व्यंजनहरु को बारे मा राम्रो कुरा हामी तिनीहरु लाई आफ्नो मनपर्ने मा अनुकूलन गर्न सक्छन्। म रोटीको साथ गजापाचोस मन पराउँदिन र त्यसैले किन म त्यसो गर्दछु, जे होस् मौलिक होस् भनेर। शुभकामना।
महान केटीहरू !!!! मैले भर्खरै यसलाई खानको लागि बनाएको छु र ताजा हुनुको साथै यसको स्वाद र बनावट पनि छ ..... तपाईंको व्यंजनहरुका लागि धन्यवाद !!!
म तपाइँलाई मन परेकोमा धेरै खुशी छु, लुर्ड्स! शुभकामना।
यस gazpacho को लागि धेरै धेरै धन्यवाद !! उत्कृष्ट !! हामीलाई बढी तरल पदार्थ मन पर्छ त्यसैले धेरै पानी र रोटी छैन। यति गर्मीको दिनहरूमा कत्ति राम्रो महसुस हुन्छ। धेरै चुम्बनहरु
ठिक छ, तपाईंले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईंले यसलाई आफ्नो स्वादमा आश्चर्यजनक ढ !्गले रूपान्तरण गर्नुभयो! मलाई पक्का छ कि यो त्यो तरिका पनि राम्रो छ।
यो महान बाहिर आयो, मैले आइस वा रोटी थपिन, तर मैले यसलाई फ्रिजमा एउटा जारमा राखें ... र यो लत हो! खैर, मैले कुचिएको टमाटरको साथ गरे किनकि मलाई थाहा थिएन कि यदि प्राकृतिक टमाटर छाला राख्नु पर्छ र बीजहरू हटाउनु पर्छ भने…।
नमस्ते र बधाई हो यो पकाने को लागी कि सधैं राम्रो बाहिर!
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद, क्रिस्टिना। तपाईं पूरै टमाटर राख्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग धुनुहोस् किनभने तिनीहरू राम्ररी क्रश गर्दछन्।
नमस्कार मैले गजपाचो धेरै चोटि अन्य व्यंजनहरू पछ्याएको थिएँ तर यो मेरो लागि उपयुक्त छैन। आज मैले यो तपाईंको साथ गरेको छु र यो उत्तम छ। त्यो यदि मैले काकडी जोडेको छैन भने यो मेरो लागि उपयुक्त छैन। र मैले हरियो काली मिर्च प्रतिस्थापन गरेको छु, जुन मसँग थिएन, रातो मिर्चको साथ। मैले भने।
यो सुन्तला र रातो पनि भएको छ।
नुस्खा को लागि धन्यवाद र वेब को लागी सामान्य, यो धेरै राम्रो छ।
सत्य यो हो कि Thermomix संग यस्ता बनाउने विधिहरू धेरै सजिलो हुन्छ र तिनीहरू सँधै राम्रोसँग बाहिर जान्छन्। तपाईंको जस्तो टिप्पणीहरूले हामीलाई व्यंजनहरू बनाउने र प्रकाशन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद!
यो ओस्कुआ हो !!!
मारियाब्रिंगलाई जवाफ दिनुहोस्
महान जना! सत्य यो हो कि हामी आधारभूत नुस्खा दिन्छौं र, निश्चित रूपमा, प्रत्येकले यसलाई आफ्नो स्वादमा अनुकूल गर्दछ। उदाहरण को लागी, मैले खर्च गर्नु पर्ने चीजको आधारमा पहिले नै आँखाद्वारा सामग्री बनाउँछु। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
नुरिया रुआनो बेजारानो भन्यो
धेरै राम्रो gazpacho
नुरिया रुआनो बेजारानोलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धनी सत्य यो हो कि मैले भन्नु पर्छ कि म र थर्मोमिक्स राम्रोसँग प्राप्त हुँदैन, मसँग एकदम कमजोर पकाउने विधिहरू छन्, तर यो गजापाचो स्वादिष्ट छ!
एन्टोनिया रुज भन्यो
ब्लग। यो महान म यहाँ बाट धेरै व्यंजनहरु बनाउँछ .. धन्यवाद
एन्टोनिया रूजलाई जवाफ दिनुहोस्
हामीलाई र तपाईंको सन्देशको लागि एन्टोनिया धन्यबाद। अंगालो
नमस्ते, व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद। म काली मिर्चमा असहिष्णु छु, किन अर्को तरकारीहरू मैले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दछु?
Xelo लाई जवाफ दिनुहोस्
र तपाईं किन साल्मोरेजो बनाउन सक्नुहुन्न जुन टमाटरको पनि राम्रो छ तर खुर्सानी छैन?
Zucchini lasagna मशरूम र अरोरा सॉस संग
सुपर क्रीमी बाख्रा चीज केक